Umshado – iAfrika
Iculo elikhombisa ukungenami ngomendo
Indaba ebuhlungu yabantu ikakhulukazi besifazane abaganiswa ngaphandle kwemvume yabo ngenxa yenkece etholwa umndeni kamakoti uma kulotsholwa insakavukela umchilo wesidwaba emhlabeni jikelele. Kanjalo-ke nasezweni lamaZulu lokhu kunokwenzeka futhi kunomlando omude, ngangokuthi kwaze kwaqumbuka ingoma ethi uBaba udayise ngami. Leli culo lihaywa kanje: Ubaba nomama bangishiy’ okhalweni Angizazi ukuthi ngiyinto yokwenzani Ngiyeke baba ngiseyingane x2 We bomalume … Read more
Tags Umculo, Umendo, Umshado
Ingoma yokuvulisa abasekhweni amasango
Uma kugiywa, kuyiwa le nale kugujwa ukuhlangana ngokothando nangokomshado ngokwesintu esizweni samaZulu, iculo elithi ‘Sivulele singene’ alivamile ukusala ngaphandle. Leli culo livame ukuculwa ngabasekhweni uma bezocela isihlobo esihle emndenini womakoti. Abasekhweni basuke bezicelela kuyise kamakoti ukuthi abavumele bengena emagcekeni ukuze kuxoxwe indlela eyaphambili nezohlanganisa imindeni yombili. Uma nje bevulelwa isango, abasekhweni basho ngengila, becula leli … Read more
Tags Ingoma, Umshado
Tags Izinkolelo zesintu, Umshado